The Ab Presents Nepal » लण्डनमा धुम धाम सग ओलीपूजा !
लण्डनमा धुम धाम सग ओलीपूजा !
नाचगान, ओलीको ठीकैको भाषण सकिएपछि उनी पालबाट निस्कने तरखरमा रहे। मानिसहरू लामवद्ध भए केही बेर। म पनि मेरो साथीसँग उभिएँ, हातमा पत्र बोकेर। सुरक्षाकर्मीहरूको चहलपहल बढ्यो। मैले यो पत्र प्रमलाई दिन पाम भनेर केहिलाई अनुरोध गरेँ। धेरैले हुँदैन भने। त्यत्तिकैमा एक कर्णेलले रिसाएर मलाई हेर्‍यो र हातले धकेल्दै अलिक पर पुर्‍यायो। सायद यी नेपाली बन्दुकेलाई थाह भएन कि युकेमा कसैलाई हात हाल्नु अपराध हो। मैले प्रहरी बोलाउन, हंगामा गर्न सक्थेँ, तर चुपचाप अपमान सहेर उभिरहेँ। मेरो राज्यको चरित्र अझै कस्तो छ भन्ने मनन गरेँ।
मसँगै उभिएका पूर्व वेलायती राजदूत र मेरा दूतावासमा सहकर्मीले भने– हेर, कतिपय कुरामा हामी वेलायती पनि परम्परावादी छौं। रानीलाई अझै साक्षात् देवी जस्तो गर्छौं। तर यो खाले भक्ति चाहिँ कहिल्यै हुँदैन। आज प्रम मे यहा आएको भए केही वेलायतीले गोलभेडा र आलुले हान्थे होला !किन वेलायत वेलायत भयो, नेपाल सदैव विश्वमै एक दरिद्र राष्ट्र रह्यो भन्ने कुरा यही सानो घटनाले पनि देखाउँछ। हाम्रो मुलुकमा राजा त गए, राजतन्त्र गएको छैन।